Fanodinana ireo masinina - K-Tek Machining Co., Ltd.
K-Tek Machining Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2007, miorina ao Dongguan, Sina, ny "renivohitr'orinasa manerantany", manarona faritra mihoatra ny 20.000 metatra toradroa, manam-pahaizana manokana amin'ny fanodinana ireo faritra milina ary nandalo ny ISO9001 : Fanamarinana rafitra fitantanana kalitao 2015.
Ny K-Tek Machining dia manome serivisy OEM / ODM, azontsika atao ny manamboatra ny famokarana karazana milina mazava tsara arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa, vokatra mifandraika amin'ny milina, elektronika, mandeha ho azy, fiara, fiara, angovo vaovao ary sehatra hafa. Mba hiantohana ny fitakiana kalitaon'ny mpanjifanay dia nanafatra fitaovana fanodinana mandroso sy fitaovana fitiliana toy ny Machine dimy axis (DMG), CNC, WEDM-LS, Mirror EDM, Grinder anatiny / ivelany, Laser Cutting, 3D CMM, Fandrefesana haavo sy mpandinika fitaovana sns avy any Alemana, Japon, Suisse ary Etazonia. Ny orinasa dia manana fitaovana fikirakirana mazava tsara sy rafitra fitantanana kalitao henjana, ny kalitaon'ny ampahany mazava tsara dia afaka mifanaraka amin'ny fenitry ny indostria manerantany, vokatra amidy any ivelany.
Ny fitaovana iraisanay dia vy vy, aliminioma, varahina, vy ambany karbaona, plastika injeniera ary karazana vy hafa. Afaka manome fitsaboana hafanana sy fitsaboana isan-karazany ho an'ny mpanjifa koa izahay: polishing, anodizing, galvanizing, nickel plating, plating volafotsy, passivation, spraying vovoka, sns.
• Fitaovana: Machining cnc axis (3 & 4 & 5), milina iraisana, WEDM-LS, Mirror EDM, Grinder anatiny / ivelany, fanapahana laser, 3D CMM, fandrefesana haavo ary mpandinika fitaovana sns.
• Fenitra feno, fifanarahana famatsiana maharitra.